चार सन्तानसहित भेरीमा हेलिएको सुकीको सपना, कोही हिन रोज्छन् यस्तो बाटो? – Health Post Nepal
चार सन्तानसहित भेरीमा हेलिएको सुकीको सपना, कोही हिन रोज्छन् यस्तो बाटो?
२०७७ फागुन २६ गते १७:१२
आइतबार ८ मार्चका दिन सारा विश्व नै महिला दिवस मनाइरहेको थियो। तर दैलेखको आठबिस नगरपालिका ३ निमायलयकी ३५ वर्षीया सुकी बडुवालको मनमा भने चैन थिएन। साँझ ४ बजे उनी माइती जान्छु भन्दै चार छोराछोरीसहित घरबाट निस्किइन्।
त्यसपछि माइत जानुको साटो कर्णालीतर्फ सोझिइन्। र, १५ वर्षीया छोरी कल्पना, १२ वर्षीया छोरी सरिता, १२ वर्षीय छोरा ललित र सात वर्षीया छोरी रजनीसहित हामफालिन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका डिएसपी अनुपम श्रेष्ठले बेपत्तामध्ये चार जनाको शव फेला परिसकेको जानकारी दिए। सुकी र उनका छोरा ललितको शव गोताखोरको टोलीले मंगलबार फेला पारेको थियो। सात वर्षीया छोरीको शवमात्रै फेला पार्न बाँकी रहेको श्रेष्ठले बताए।
१६ वर्षीय कल्पना र १२ वर्षीया सरिताको शव हात बाँधिएको अवस्थामा फेला परेको थियो।
प्रहरीले सुनिताका श्रीमान् मानसिंहलाई पक्राउ गरेको छ। दैलेख आठबिस नगरपालिका उपप्रमुख दीपा बोहराले घरेलु हिंसाका कारण घटना भएको बताइन्। ‘घटना भएको दिनमा पनि श्रीमानले ती महिलासहित छोराछोरीलाई कुटपिट गरेको पाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सधैँ मदिरा पिएर ती महिलालाई श्रीमानले कुटपिट गर्ने गरेका थिए।’
हुन त कर्णालीमा गरिबीले मान्छेको ज्यान लिएको कुरा कुनै नौलो भने होइन। यद्यपि यति कारुणिक घटना भने विरलै हो। चरम गरिबी र दिनहुँ श्रीमानले मदिरा सेवन गरेर कुटपिट गरी पारिवारिक कलह बढेका कारण विक्षिप्त भएपछि सुकी बडुवालले आत्महत्याको बाटो रोजिन्। प्रहरीको अनुसन्धानबाट गरिबी र श्रीमानको मदिरा सेवनले निम्त्याएको समस्याका कारण सुकीले त्यस्तो बाटो रोजेको खुलेको हो।
‘घटनाको प्रकृति हेर्दा घरेलु हिंसाका कारण सुकीले सन्तानसहित आत्महत्या रोजेको आशंका छ,’ दैलेखका डिएसपी श्रेष्ठले भने, ‘सुकी बेपत्ता भएको दिन पनि मानसिंहले रक्सी पिएको देखिन्छ।’ यस्तै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका मानसिंहले पनि रक्सी पिउने र कहिलेकाँही घरमा झगडा हुने गरेको बयान दिएका छन्।
सुकीले आफैँ मजदुरी गरेर ६ जनाको परिवार पालनपोषण गर्दै गरेकी थिइन्। एक वर्षदेखि दैनिकजसो श्रीमानले मदिरा सेवन गरी कुटपिट गर्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। भारतमा मजदुरी गर्ने उनका पति मानसिंह कोरोना महामारीपछि २०७६ चैतमा घर फर्किएका थिए।
मृत भेटिएका आमा र ३ छोराछोरीको शव पोष्टमार्टमका लागि अछामको मंगलसेन पठाइएको डिएसपी श्रेष्ठले बताए। कारुणिक घटनाले पुरै गाउँ शोकमा डुबेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
२०७६ माघ २ गते एक दम्पती ६ महिना र २ वर्षका दुई छोरासहित धादिङको बेनिघाट रोराङ–१ स्थित झोलुङ्गे पुलबाट त्रिशुली नदीमा हामफाले।
काठमाडौं थानकोटका विनय लामिछाने र उनकी श्रीमतीले २ छोरासहित त्रिशुली नदीमा हाम फालेका थिए। सँगै हाम्फालेका विनयको तत्कालै प्रहरीले उद्दार गरेको थियो।
नदीमा बेपत्ता अन्य तीन जनाको खोजी गर्दै जाँदा विनयकी श्रीमती मृत अवस्थामा फेला परिन् भने हालसम्म दुई सन्तान बेपत्ता नै छन्।
विभिन्न व्यवसायमा लगानी गर्दै आएका विनयको पछिल्लो समय कारोबार बिग्रिदैँ गएको थियो। ऋण खोजेर व्यवसायमा हात हालेपछि उनी माथि उठ्न सकेनन्।
ऋणले थिच्न थालेपछि श्रीमतीकै सल्लाहमा ससुराली गएर फर्किएको मौकामा त्रिशुली नदीमा हाम फालेका थिए।
२०७५ साउन ५ गते डोटीको आदर्श गाउँपालिका–४ बस्ने बमबहादुर बोहराकी श्रीमतीसहित २ छोरा र १ छोरीले सेती नदीमा हाम फाले।
बोहराकी २८ वर्षीया श्रीमती धौली बोहरा, १२ वर्षीया छोरी राधिका बोहरा, ८ वर्षीया छोरा सुरेन्द्र बोहरा र ६ वर्षीय छोरा सुनील बोहरा सामूहिक रुपमा सेती नदीमा हाम फालेका थिए।
बमबहादुर बोहराका ६ वर्षीय छोरा सुनीललाई सेती नदीमा माछा मार्दै गरेका मानबहादुर बिकले बचाएका थिए भने अन्य तीन जना बेपत्ता भए।
बमबहादुर दम्पत्तिले जंगलमा गाईबाख्रा चराईरहेकी जेठी छोरी र माइलो छोरोलाई पनि सँगै लगेर सेती नदीमा हाम फालेका थिए। कान्छो छोराको कान पाकेकोले उपचार गराउन अस्पताल लैजान्छु भनेर घरबाट हिँडेकी थिइन् धौली।
आर्थिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक भएपछि धौलीले आफ्ना सन्तानसहित नदीमा हामफालेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आत्महत्या गर्नुअघि १५ दिनअगाडि मात्र धौलीले भारतमा रहेका श्रीमानलाई बोलाएकी थिइन्।
त्यसैगरी, २०७६ चैत २९ गते पर्वतको कालीगण्डकी नदीमा हामफालेकी एक महिलालाई स्थानीय युवाले उद्दार गरेर बचाए। तिनै महिलाले पुनः चार दिनपछि कालीगण्डकी नदीमा हाम फालेर मृत्युवरण गरिन्।
त्यसरी मृत्युवरण गर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका घर भई पर्वतको जलजला गाउँपालिकास्थित वारी बेनीमा मजदुरी गरेर बस्दै आएकी ३५ बर्षीया देवी थापामगर थिइन्।
पुनः नदीमा हामफालेकी सूचना पाएलगत्तै उद्दार गर्न खटिएको प्रहरीले उनलाई घटनास्थलबाट करिब डेढ सय मिटर तल मृत अवस्थामा फेला पारेको थियो।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा उनले आत्महत्या गर्नुको कारण गरिबी र पारिवारिक समस्या रहेको खुलेको थियो। परिवारबाट अपहेलित भएर दुर्गम गाउँमा मजदूरी गर्न पर्वत पुगेकी देवी उक्त ठाउँमा बस्न नसकेपछि आत्महत्याको बाटो रोजेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
पछिल्लो समय गरिबी, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्धमा उतारचढाव तथा मानसिक समस्याका कारण आवेगमा आएर आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दो छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा प्रत्येक दिन चार जना मानिसले आत्महत्या गर्ने गर्छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त कुँवरले पछिल्लो समय आत्महत्याको संख्या बढ्दो रहेको जानकारी दिए।
अझ, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका अति विकट गाउँमा यस्तो समस्या रहेको प्रवक्ता कुँवर बताउँछन्। ‘शिक्षाबाट बञ्चित रहेको गाउँहरुका मानिसहरु विरक्त भएपछि आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेका छन्,’ प्रवक्ता कुँवरले भने।
आत्महत्या चिन्ताजनक ढंगले बढ्नुमा आर्थिक र सामाजिक कारणलाई मुख्य ठान्छन् मनोविश्लेषक बासु आचार्य। सञ्चारलगायत प्रविधिको पहुँचले सबै जानकारी हुने तर गरिबीले आवश्यकता पूरा गर्न समस्या हुँदा मानिसमा निरासा बढेको उनी बताउँछन्।
आत्महत्या बढ्नुको भित्री कारण मानसिक समस्या रहेको बताउँदै आचार्यले भने, ‘गरिबी, पारिवारिक र सामाजिक सम्बन्ध पनि आत्महत्याका कारण हुन्। बाहिर पारिवारिक झैझगडा, ऋण तिर्न नसकेर वा अन्य कारण देखिए पनि भित्री कारण मानसिक समस्या भएर नै देखिन्छ।’
‘बढ्दो आत्महत्या सामाजिक समस्या हो,’ आचार्यले भने, ‘आत्महत्या कम गर्न विद्यालय तहदेखि नै मनोपरामर्श दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ।’
Tags: सुकी बडुवाल